(SaWIRRO) Wafdi ka socda dowladda federalka iyo maamul goboleedyada oo Garowe u yimid aqoon kororsi. | puntlandi.com
Wednesday, September 6th, 2017 | Posted by Pi
(SaWIRRO) Wafdi ka socda dowladda federalka iyo maamul goboleedyada oo Garowe u yimid aqoon kororsi.
Wefdi ka kooban wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaliya ,xildhibaanno iyo wasaaraddaha Arrimaha Gudaha Dowlad goboleedyada Dalka oo uu hoggaaminayey Agaasimaha Guud ee federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maxammed Cabdiwahaab ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Waxaa garoonka diyaaradaha Kanooko ku soo dhoweeyey mas’uuliyiin uu ugu horreeyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Cabdullaahi Xirsi Cali (Tima-cadde),guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi(Faro-weyn) iyo dadweyne kale.
Ujeedka imaatinka weftigaan ayaa ah safar booqasho oo daarran sidii loo wadaagi lahaa khibradda dhanka maamul-daadeijina oo Puntland ay ku horrayso, si khibraddaasi loogu celiyo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Maxmmed (Faro-weyne) oo ugu horrayn ka hadlay soo dhoweynta wefdiga ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay imaatinka wefdigaan, maadaama sida uu tilmaamay uu is dhex gal iyo wada shaqayn abuurayo imaanshahooda, lana kala faa’idaysanayo khibrado wax ku ool ah.
Wasiirka arrimaha gudaha puntland Cabdullaahi Cali Xirsi(Tima-cadde) ayaa dhankiisa wefdiga ku soo dhoweeyey caasimadda garoowe,wuxuuna sheegay in wefdiga ay is waraysan doonaan oo arrimo badan ka wada hadli donaan.
Agaasimaha Guud ee Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in u jeedka imaatinkoodu yahay in labo qodob oo kala ah in
1)In Puntland laga faa’daysto khibradda ay u leedahay dhinaca Federaalism-ka iyo
2) In la xoojiyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka maamullada ka jira Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowlad-goboleedka K/galbeed Madoobe Nuunow Maxmmed oo ku hadlayey Af-ka maamulgoboleedyada ayaa sheegay in ay puntland u yimaadeen sidii ay uga heli lahaayeen khibradda la xiriirta dhanka federaalism-ka.
ENG, Camey,” Dowladda Puntland waxay qaadanaysaa kaalinteeda ku aadan in Soomaaliya gaarto doorasho dadweyne 2020.
Dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland oo murtiyeed kasoo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Carmo.
Madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya oo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir
BREAKING NEWS:- Xafiiska raysal wasaaraha oo hadda looga yeeray warfidiyeenada.
Shacabka Tukaraq.” Dhulkeena cadow Hargeysa kasoo duulay ayaa qabsaday loona kala harimaayo xorayntiisa.
Madaxweyne Gaas oo diiday inuu wax gorgortan ah ka galo xaaladaha haatan ka taagan gobolka Sool.
Dowlada Puntland oo boqolaal kun oo dollar u qorshaysay Dadka ku nool Deegaanka Tukaraq
Abaar xoogan oo ku dhufatay gobolka Karkaar iyo baaq culus oo maamulka gobolka kasoo baxay.
Shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.